Doonni muhaajiriin wadda oo iska dhagatirtay xannibaadda Talyaaniga ee soo galootiga | Biyoguurenews.com
Home Wararka Doonni muhaajiriin wadda oo iska dhagatirtay xannibaadda Talyaaniga ee soo galootiga
Doonni muhaajiriin wadda oo iska dhagatirtay xannibaadda Talyaaniga ee soo galootiga
Markii aasku u madoobaaday jasiiradda Lampedusa, shqaalaha iyo rakaabkii saarnaa doonta lagu magacaabo Alex kama aanay dagin dusheeda, oo waxaaba waardiye ka hayey booliiska.
Waloow digniin la siiyey, haddana doontaasi waxay Sabtidii ku xiratay dekadda ayadoo ay dusheeda ka jiraan xaalado caafimaad xumo oo aad u liita.
Matteo Salvini, oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga ayaa wacad ku maray in dooni muhaajiriin sidda aanay ku soo xiran Karin dekedaha Talyaaniga.
Sannadkii hore, ayuu dekedaha Talyaaniga ka xiray maraakiibta soo badbaadiya muhaajiriinta, Talyaaniga ayaana ganaax ku soo rogay cid kasta oo soo gasha biyaha Talyaaniga ayadoon amar ka haysan dalkaas.
Doonta lagu magacaabo Alex oo ay maamulaan urur samafal ah oo la yiraahdo Mediterranea charity, ayaa barta twitter-ka ku soo qoray in shaqalahooda dul saaran doontaas ay xaalad xun ku sugan yihiin.
“Waa xaalad aan la rumaysan Karin,” ayay tidhi haweeneey afhayeen ah oo la yiraahdo Alessandra Sciurba. “Waxaa jira dad halis ugu jira in ay neeftu ku xiranto oo ay miyir daboolmaan, musquluhuna ma shaqaynayaan. Waxaadba mooddaa in nala afduubtay.”
Dhanka kale, Markab kale oo lagu magacaabo, Alan Kurdi oo ay maamusho hay’ad samafal ah oo Jarmal ah ayaa sabbaynaya biyaha caalamiga ah ee ka baxsan jasiiradda Lampedusa, waxayna siddaa 65 kale oo muhaajiriin ah.
Muxuu Talyaanigu u diiday in doonyuhu ku soo xirtaa dekedihiisa?
Talyaaniga ayaa ah halka ay Yurub ka soo galaan Muhaajiriinta doonaya in ay galaan, waxay soo maraan Waqooyiga Afrika, gaar ahaan Libya.
Dadka wax tahriibiya ayaa badanaa soo buux dhaafiya doonyo aan safar ku habboonayn ayagoo soo qaada tobonaan dad ah halkii marba, waxayna dadkaasi ku dambeeyaan in ay badda ku silcaan oo marka dambana ay badbaadin u baahdaan.
Mr Salvini, oo ka tirsan xisbiga midigta ee League party, ayaa mawqif adag ka istaagay muhaajiriinta iyo maraakiibta wax soo badbaadiyaba – arrintaas oo ay taageero badan ku heleen asaga iyo xisbigiisuba.
Bishii February, ayaa waxaa lagu soo warramayaa in Talyaanigu uu diiday 24,800 oo qof oo magangalyo doon ah intii u dhexaysay bishii October sannadkii 2018 ilaa bishii January ee sannadkan.
Xog uruurin uu Sabtidii daabacay wargayska Corriere Della Sera ayaa lagu sheegay in 59% dadka Talyaaniga ay soo dhaweeyeen tallaabada Mr Salvini uu ku xayiray dekedaha iyo maraakiibta ay leeyihiin ururada samafalku.
Bishii hore ayay xukuumaddiisu meel marisay xeerar cusub iyo dikreeto deg deg ah kuwaas oo soo rogay ganaax lacageed oo gaaraya €50,000 (£45,000; $56,000) oo lagu soo rogay maraakiibta amar la’aan ku soo xirta dekedaha Talyaaniga.
Toddobaad ka hor, markabka lagu magacaabo, the Sea-Watch 3, ayaa si khasab ah ugu soo xirtay jasiiradda Lampedusa kaddib markii uu badda ku xayirnaa muddo labo toddobaad ah. Kabtankii waday oo lagu magacaabo Carola Rackete, ayaa xabsiga loo taxaabay, ayadoo lagu eedeeyey in ay khatar galisay nolosha booliiska oo ay isku dayday in ay quusiso doontii ay booliisku saarnaayeen.
Garsooraha maxkamadda ayaa amar ku bixiyey in la sii daayo, in kastoo ay wali wajahayso eedaymo kala duwan oo ay ka mid yihiin in ay gacan siisay dadka wax tahriibiya iyo in ay iska caabbisay masuuliyiinta dalkaas.
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku adkaysanaysa in doonyaha noocaas ah looga hortago xeebaha Libya, halkaas oo ay ku sugan yihiin ilaalo uu lacag siiyo Midowga Yurub.
Markii uu soo baxay warka ku aaddan in doonta Alex ay Sabtidii ku soo xiratay deked ku taal jasiiradda Lampedusa, ayaa Mr Salvini waxa uu mar ku bixiyey in ay hay’adaha sharcigu ay arrintaas faragaliyaan.
Talyaaniga ayaa ah dalka ugu dhow ee laga soo badbaadin karo muhaajiriinta ka imaanaya xeebaha Libya.
Qaar badan oo ka mid ah maraakiibta wax soo badbaadiya iyo ururada samafalka ayaa Libya u ah meel aan nabad ahayn oo aanay ka dhaqan gali Karin sharciyada caalamiga ah.
Previous articleWaftigii Madaxweynaha Somaliland Oo Soo Gaadhey Itoobiya
Next articleMareeyaha Wakaalada Biyaha Laascaanood Oo Laga Waraystay Mashruuca Biyaha.